Ifowuni ye-Sharp Aquos SH-12C, i-3D entsha ye-smartphone yaseJapan | I-Androidsis
Ngokuqinisekileyo ukunyuka kwe- Itekhnoloji ye-3d ingena kuyo yonke imimandla yetekhnoloji. Emva kwe-cinema, iiseti zeTV kunye nemidlalo yomdlalo, ngoku lixesha lokuba ii-smartphones zifumane inkxaso yokudlala imifanekiso kunye neevidiyo kumanqanaba amathathu.
Emva kokumiliselwa kwee-smartphones HTC EVO 3D y LG Optimus 3D, esinye isiphelo se-Android sijoyina umlo wokulawula le ntengiso. Imalunga nayo Ifowuni yeAquos SH-12C, Yenkampani Sharp.
Iimpawu zoku i-smartphone entsha ye-3D zinomdla kakhulu. Inkqubo ye- Ifowuni Sharp Aquos SH-12C Inesikrini esine-intshi ezi-4,2 kwaye ibonelela ngomgangatho womfanekiso we-QHD, enkosi kwisisombululo sayo sepikseli esingu-540 × 960.
Ukongeza, ixhotyiswe nge-8255 Ghz Qualcomm MSM1.4 processor kunye nenkqubo yokusebenza yeselfowuni I-Android 2.3 Isonka sejinja. Kwelinye icala, i I-smartphone entsha kaSharp Ineekhamera ezimbini ze-megapixel ezisibhozo kwaye ziyakwazi ukurekhoda iividiyo ze-8D kwi-HD kwi-3p.
El Ifowuni Sharp Aquos SH-12C izakwaziswa eJapan ngolwesiHlanu olandelayo, nge-20 kaMay kwaye iya kuthengiswa ngumqhubi NTT Docomo. Idatha ekufikeni kwayo kwiimarike zamanye amazwe ayikaziwa, nangona isenokungaze iwele imida yaseJapan.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ifowuni ye-Sharp Aquos SH-12C, i-3D entsha ye-smartphone yejapan
I-Abobe Flash 10.3: amanqaku amatsha esicelo seFlash Player ye-Android
Ukhuseleko lwe-ESET: i-antimalware eyaziwayo yezixhobo eziphathwayo iza kwi-Android